गोरो हुने मन छ ? घरेलु ३ सरल र अदभुत उपायहरु « Dhankuta Khabar
गोरो हुने मन छ ? घरेलु ३ सरल र अदभुत उपायहरु
समय : 4:57 AM
एजेन्सी । टिभी, पत्रिका अनि रेडियोमा हामीले धेरैजसो गोरो र चम्किलो छालाका लागि आएका कसमेटिक्स सामानहरुका विज्ञाजन देख्दै अनि पढदै सुन्दै आएका छौ । के सुन्दरता त्यती महँगो छ त ?परापुर्वकालमा अदभुत सुन्दरिहरु यी व्यवसाहीक अनि प्रशोधीत उत्पादन बिनानै के कारणले त्यति सुन्दर थिए त ?
फेरि सुन्दरता र गोरोपनालाई केवल नारीसौन्दर्य सँग मात्र हेरिनु पनि हुँदैन् है । आखिर पुरुषहरुलाई पनि राम्रो देखिन र स्वस्थ रहन त्यतीनै जरुरी छ जति नारीलाई छ । आउनुहोस एउटा औसत नेपाली भान्सामा बनाउन सकिने घरेलु सुन्दरताका विधीहरु प्रस्तुत गर्दछौ, नियमीत प्रयोग गरिएमा फरक आँफै देख्न सकिन्छ ।
३ः नुनको प्रयोगले कसरी अनुहारको छाला राम्रो बनाउन सकिन्छ आउनुहोस् कुरा गरौ । नुनमा एन्टीव्याक्टोरीयल र क्लीन्जीगं गुणहरु हुन्छन् । यसले गर्दा अनुहारको छालाका फोहोर तन्तुहरु हटाउने र व्याक्टोरीया वाट जोगाउने काम पनि नुनले गर्दछ ।
गहिरो सफाई भएपछि अनुहारमा चमक आँउदछ र सुन्दर देखिन मद्धत गर्दछ । यसरी नुनको पेस्ट स्क्रब गरेको १० या १५ मिनेटमा अनुहारलाई सफा पानीले धुन पर्दछ । स्मरण रहोस् यदि अनुहारमा घाउ या कुनै चोटपटक छ भने यो विधी उक्त घाउ निको नभएसम्म प्रयोग नगर्नुहोला ।-ओएसनेपाल
(नोट: “माथि उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी विभिन्न अनलाइन तथा पत्र-पत्रिकाहरुबाट साभार गरिएको हो। यी बिषयवस्तुहरु केवल जानकारीको लागी मात्र यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गरेका हौँ। कुनै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धि टिप्सहरु प्रयोग गर्नु भन्दा पहिला अनिवार्य रुपमा चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोला।)